၃၁ အလယ်တန်းကျောင်းမှာသင်လေ့လာခဲ့တဲ့အသုံးမကျတဲ့အရာတွေ၊ သင့်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဘဝမှာဘယ်တော့မှမကူညီဘူး - သတင်း
၃၁ အလယ်တန်းကျောင်းမှာသင်လေ့လာခဲ့တဲ့အသုံးမကျတဲ့အရာတွေ၊ သင့်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဘဝမှာဘယ်တော့မှမကူညီဘူး
သင်အလယ်တန်းကျောင်းမှထွက်ခွာသောအခါသင်သည် GCSEs နှင့် A-level အချို့နှင့်သာမကသင့်ဘဝတွင်ဘယ်တော့မှထပ်မံလိုအပ်တော့မည်မဟုတ်သည့်လုံးဝအသုံးမကျသောဗဟုသုတ၏နောက်ကျောစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားသည့်ရှေ့အပြေးသမားများသည်မနုologyဗေဒတွင်သင်စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည့် Simon Armitage ၏ကဗျာများ၊ cos, sin နှင့် tan နှင့်ထိုရူပဗေဒဆိုင်ရာညီမျှခြင်းများအားလုံးကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုပါ ၀ င်သည်။
သို့သော်အမှန်တကယ်, ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအပေါ်အချိန်စုစုပေါင်းစွန့်ပစ်ခဲ့ကွောငျးကိုကျောင်းကပိုလျှော့အချိန်လေးများစုဆောင်းမှုရှိပါတယ်။ ဘယ်တုန်းကလိုလှံကိုဘယ်တုန်းကပစ်လိုက်တာလဲ သင်ထွက်ခွာပြီးကတည်းကဒိန်းမတ်ပွင့်လင်းသားညှပ်ပေါင်မုကိုသင်အကြိမ်ဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့သလဲ မင်းခေါင်းပေါ်မှာသေနတ်တစ်ချောင်းစီနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အိုင်အမျိုးမျိုးကိုနာမည်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ မဟုတ်ပါ။
ကျောင်းကမိုက်မဲတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပြည့်နေတယ် နှင့်ပင် stupider သင်ရိုးညွှန်းတမ်း။ ဤတွင်ကျောင်းတွင်သင်အမှန်တကယ်ဘဝ၌တစ်ခါမျှမသုံးဖူးသောအရာများ (ဥပမာ) သာဖြစ်သည်။
ဒန်နီဖွင့်လှစ် SANDWICH လုပ်နည်း
၎င်းသည်စာသားအရပေါင်မုန့်တစ်ဖဲ့ဖြစ်ပြီးသင်အပေါ်၌ကြိုက်သလောက်ထိပ်ဖျားသည်။ တူသောကင်ကင် ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်ခွဲသားညှပ်ပေါင်မုန့်။
သငျသညျသင်္ချာပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိလျှင် (မည်သူမျှ) သင်ကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်သင်္ချာပညာ၌သင်ကြားသောအရာသည်အဝေးမှအသုံးဝင်သည်။ မူလတန်းကျောင်းသင်္ချာများတွင်ခြေထောက်များပိုများသည်သင်သိသည် - သင်အရက်ဆိုင်တွင်ပိုင့်တစ်ပြား ၀ ယ်ယူနိုင်ခြင်းရှိ၊ ကအဆုံးသတ်ဘယ်မှာကြောင်းပါပဲ။
မှတ်သားလောက်ဆုံး, PYTHAGORAS '' သီအိုရီ
၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အချက်ကိုလိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်လူသားတစ် ဦး ကိုသင်ကြားရန်ရယ်စရာမလိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ ငါတြိဂံတွေအတွက်သိပ်ဂရုမစိုက်ဘူး
Simon Armitage၊ ကာရယ်လ်အန်းဒီဖီ သူတို့သည်သင့်အားငှားရမ်းသည့်စျေးကွက်တွင်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအိမ်တစ်လုံးကိုရှာဖွေရန်ကူညီပေးခဲ့သလား၊ နံပါတ်
သင်သိသောစော်ကားမှုအကြောင်းသိထားသူတစ် ဦး အကြောင်းမည်သို့ပြောဆိုရမည်နည်း၊ ပြင်သစ်တွင်။
ကျွန်တော့်အမေကကိုကင်းစွဲလမ်းမှုရှိတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုအခြေခံအားဖြင့်နည်းနည်းကျော်ပြီးသွားနိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ အဖေကအလျင်အမြန်ကျွန်တော့်ကိုရုပ်ရှင်ရုံ၊ ပြီးတော့ငါတို့စားရမယ့်ကမ်းခြေကိုခေါ်သွားမှာပါ။ fries ။
သူတို့သည်ပွင့်လင်းသောနေ့၌သင့်ကိုအထင်ကြီးစေလို။ သင်၏ ၁၁ နှစ်အရွယ်စိတ်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်သောအခါသူတို့သည်ဤမကောင်းသောကောင်လေးကိုလှိမ့်ချလိုက်သလား။ သူတို့ဟာဂျယ်လီကလေးကိုမီးပေါ်မှာလောင်ကျွမ်းစေသလိုအော်ဟစ်၊ Whoop က de fuck ဆိုတဲ့လုပ်ပါ။ ငါအိမ်ပြန်သွားပြီး COD ဖုတ်ကောင်အချို့ကစားနိုင်သလား။
ငါသူတို့ပြီးသားသူတို့, jazz ကို miss အမျိုးအစားများကိုငါသိ၏။
တစ် ဦး JAVELIN ပစ်ချဖို့
နောက်တစ်ခါလှံကိုပစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီဟာရှေးခေတ်ဂရိနိုင်ငံမဟုတ်ဘူး။ ဤသည် Troy ၏စစ်တိုက်မဟုတ်။
ကောင်းပြီဒီစမ်းသပ်မှုဝန်ခံရမည်ပျော်စရာ - ဒါပေမယ့်ဘဝသင်ခန်းစာခဲ့သလဲ ငါအဲဒီလိုမထင်ပါဘူး
ငါတို့ယဉ်ကျေးမှုအရကြီးကျယ်ခမ်းနားသောဗြိတိသျှအမှတ်အသား၊ ငါတို့ခေတ်၏အကြီးမားဆုံးကဗျာဆရာကိုထုတ်ပယ်ခြင်းဟူသောစိတ်ကူးကိုအမျက်မထွက်မီအားလုံးအခြေချကြပါစို့။ ရှိတ်စပီးယားကဒီအရာအားလုံးအတွက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီနှစ် ၉ လုံးဟာစိတ် ၀ င်စားမှုရှိသင့်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ Eng Lit ကိုလူတွေကိုပိုလေ့လာစေချင်လို့လား။ တဖန်သင်တို့အဘယ်သို့သိ - သင်ဖတ်နေထက် Romeo နှင့် Juliet ၏ Baz Lurhmann ရဲ့လိုက်လျောညီထွေစောင့်ကြည့်ပိုပြီးလေ့လာသင်ယူ။ အဲဒီမှာငါကပြောသည်။
TABLEAU ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
လူတိုင်းမြင်ကွင်းတစ်ခုထွက်ပြုမူဘယ်မှာဒါဟာperfectlyုံနေဆဲတည်းခို။ ပြီးတော့စဉ်းစားရန်၊ မင်းရဲ့တစ်နေ့တာလုံးဟာဒရာမာစာသင်ခန်းထဲမှာလုပ်ဖို့ရည်စူးထားတာပါ။
Idk, သူတို့ကပဲအရောင်ကြိုက်လား? သို့သော်လည်းငါသည်တ ဦး တည်းအဘို့အစဉ်အမြဲငါနောက်တဖန်အတော်လေးကြောင်းအဆင့်တွင်ဖတ်ပြီးသောအရာတို့ကိုအတွက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။
ငါတို့ပြောခဲ့သမျှထဲမှာအကြီးဆုံးလိမ်လည်မှုကတော့ unis ကအဲဒါတွေကိုဖတ်မယ်၊
yeah yeah '' မြင်းအဘို့အကြှနျုပျ၏နိုငျငံတျော 'သို့မဟုတ်နေရာတိုင်းမှာ။ မြင်းစီးသူရဲတွေထောင်ထဲမှာထောင်ချီနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့လယ်ကွင်းထဲမှာအချင်းချင်းလှည့်စားနေတာကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းဘူးလား။
BUNSEN BURNER သို့သင်မည်သည့်အရာ ၀ တ္ထုများထည့်သွင်းသောအခါဘာဖြစ်လာသနည်း
ယခုတွင်ငါသည် Bunsen Burner ပိုင်ဆိုင်ကြဘူး
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိပထဝီဝင်ဆရာများစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မင်းကိုမလိုချင်ဘူး။ ဒါကြောင့်ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာမီးတောင်ပြာတွေအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ မီးတောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အတွင်းအဝင်များသည်ကျွန်ုပ်သိရန်လိုအပ်သည်ဟုမခံစားရပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါ Etna တောင်ပေါ်မှာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားရမ်းရန်စီစဉ်မခံခဲ့ရစစ်ဆေးသည်။
ငါသိဖို့လိုအပ်တာကသူတို့မှာကမ္ဘာမြေကြီးရှိတယ်၊ သူတို့ကမြေငလျင်တွေဖြစ်တယ်။ ဝါကျတစ်ကြောင်း၊ သက်တမ်းတစ်ခုလုံးမဟုတ်ပါ။
သေးငယ်သောသစ်သားသေတ္တာများကို DT တွင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း
သငျသညျ DT (သို့မဟုတ်အမေရိကန်များကခေါ်ဆို: woodshop) ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီး Self- လုံလောက်သောစေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်ထင်, ငါတို့အစဉ်အဆက်ပရိဘောဂတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်, ငါမသိ, တောအုပ်၌ရှင်သန်ရန်? ဒါပေမယ့်တကယ်တော့သင်ဟာသစ်သားနဲ့ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေထဲကကွဲပြားခြားနားတဲ့သေးငယ်တဲ့သေတ္တာတွေကိုပြုလုပ်ဖို့သင်ယူခဲ့တယ် လူတိုင်းပူပြင်းသည့်ကော်သေနတ်များပေါ်တွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမီးရှို့ခဲ့ကြသော်လည်းအနည်းဆုံးယခုသင် MDF သည်အလတ်စားသိပ်သည်းဆဖိုက်ဘုတ်ပြားကိုကိုယ်စားပြုသည်ကိုသင်သိသည်။ ဒါ့အပြင်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များကိုမကောင်းသောအကျင့်ဆိုးများဖြင့်ချထားခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်။
စားသောက်ကုန်များတွင်ပုံမှန်အစားအစာ မှလွဲ၍ ဖုတ်၊ ကုတ်ဆေးများနှင့်အခြေခံအားဖြင့်အခြေခံအားဖြင့်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
အစားအစာနည်းပညာတွင်သင်ပထမ ဦး ဆုံးသင်ယူခဲ့သောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာချိုသောချိုသောချိုချိုသောအစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဘယ်သောအခါမျှအစာစားခြင်းမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ငါအစားအစာနည်းပညာအတွက်လုပ်ခံရတစ်ခုတည်းမုန့်ညက်မှတ်မိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်လူတွေက Pot Noodle ကနေထွက်ပြီးနေထိုင်ကြတာပေါ့။ ဒါဟာအစားအစာနည်းပညာရဲ့အမှားပါပဲ။ သင့်ရဲ့အစားအစာနည်းပြဆရာဟာမာကိုပီယယ်ဝှိုက်ကိုပုံမှန်စားကြတာကိုသူတို့လည်းယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ထိုမျှမက, ဂရိတ်ဗြိတိန်မုန့်ဖုတ် level ကိုမုန့်ညက်။ အနည်းဆုံးတော့ငါအမြဲတမ်းစေးကပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေရင်ငါမယားစကားကဂျုံမှုန့်၊ ငါသေချာပါတယ်တစ်ချိန်ချိန်ငါ့ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
ရူပဗေဒတွင်တစ်ခုတည်းသောညီမျှခြင်းသို့သော်အထူးသဖြင့် V = IR၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းမှ ထွက်၍ မရပါ။
ရူပဗေဒမလိုလားခြင်း၊ ခက်ခဲတဲ့သိပ္ပံပညာ၊ ကျွန်တော်မလိမ်တတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီညီမျှခြင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မှတ်သားဖို့လိုခဲ့တာလဲ။သင်လုပ်ခဲ့သမျှသည်ညီမျှခြင်းစာရွက်နှင့်စန်းကိုအလွတ်ကျက်ရန်ဖြစ်သည်။ လက်ငင်း A * ။ စုစုပေါင်း bullshit ။
သော MITOCHONDRIA သည်ဆဲလ်များ၏ပါဝါ
ငါဝါကျသည်အနည်းဆုံးဇီဝဗေဒ၏မည်သည့်အခြေအနေတွင်မျှအဓိပ္ပာယ်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကျိန်ဆိုသော်လည်း၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုသေနတ်ဖြင့်ချိန်။ mitochondria နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ခုမေးမြန်းလျှင်ကျွန်ုပ်မှတ်မိနိုင်ဖွယ်ရှိနေသည်။
ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လိပ်ပြာလေဖြတ်တာကလူတွေကိုနို့တိုက်တဲ့သူတွေအတွက်သာမကဘဝမှာလက်တွေ့ကျတဲ့အသုံးချမှုလည်းမရှိဘူး။ သငျသညျ, ahem, ရှေ့လေဖြတ်ပြုအစာရှောင်သွားပါ။ Backstroke သည်သင်၏အသက်ရှုခြင်းကိုရေအောက်တွင်မကိုင်လိုသောအခါဖြစ်သည်။ အအေးမိကြိမ်များအတွက် Breaststroke ။ လိပ်ပြာ ??? ဒီမှာထဲက fuck ဆိုတဲ့ရယူပါ။
အချင်းလူ၊ နေ့အချိန်၌ကလိုရိုပလတ်ကိုသင့်အားပြောပြနိူင်သည်။ သူတို့ဟာစိမ်းတယ်။ သူတို့အလင်းအလင်းစုဆောင်းရန်လိုအပ်သည့်အလင်းကိုစုဆောင်းသည်။ သူတို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ တ ဦး တည်း GCSE ဇီဝဗေဒစာမေးပွဲနှင့် ... ကပါပဲ။
သော STD ကာကွယ်တားဆီးရေးတရားမျှတသောအဖြစ်ရိုးရှင်းသကဲ့သို့ * မဟုတ် * လိင်ရှိသည်
နက်ရှိုင်းလွန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲလိင်ပညာရေးသည်အလွန်ဟာသတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျငါလိင်တူချစ်သူစအိုဖြင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုမှုတ်ထုတ်ခြင်းမရှိဘဲမည်သို့ပြုမူရမည်ကိုပိုမိုသိလိုသော်လည်း၊ ဤနေရာတွင် nooooooooo ကျွန်ုပ်သည်ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ကိုငါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေငါမကျင့်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုမပြုခြင်းအားဖြင့်မည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုလေ့လာနေသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အလှမယ် Hudson ။
သငျသညျ RUGBY ကဲ့သို့မဟုတ်ခဲ့ပေ
ကလေးငယ်များသည်အေးခဲသောလယ်ပြင်၌ကလေးငယ်များကိုသေစေနိုင်သောလွှတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်ကျွမ်းဘား) အတွက်သင့်ကို BEG မလုပ်မချင်းနာရီအနည်းငယ်ကြာသည်အထိရပ်တည်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
EDINBURGH ဆုချီးမြှင့်စဉ်အတွင်း TRANGIA အသုံးပြုခြင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ငါသတ္တိရှိတဲ့စူးစမ်းရှာဖွေသူများကိုအစစ်အမှန်ဘဝ၌ဤအသုံးပြုသည်ကိုပင်မသေချာပါ။ Tbh ငါနေဆဲဤအရာတစျခုအပေါ်အပြည့်အဝလောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြော်ချက်ပြုတ်ဖို့ငါ့အကြိုးပမ်းမှုကနေ scarred ။ သိသာထင်ရှားတဲ့သူတို့ခေါက်ဆွဲများအတွက်သာကောင်းသောပါပဲ။
ကောင်းပြီကောင်းပြီ၊ ဒါကပုဂ္ဂလိကကျောင်းကလေးတွေ၏ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျောင်းများမှအထက်တန်းလွှာများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏လက်တင်ဆရာ Pinocchio ဖြစ်လျှင်လက်တင်စကားသည်အခြားတစ်ခြားသင်ယူရန်သူကပြောသောအခါသူ၏နှာခေါင်းသည်တံခါးကိုထွက်သွားလိမ့်မည် ဘာလို့လဲဆိုတော့စုစုပေါင်းမြင်းခွာဖြစ်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ်။
OXBOW LAKE ဆိုတာဘာလဲ
ဘယ်အချိန်မှာငါခေါင်းကိုသေနတ်နဲ့တစ်စုံတစ် ဦး ကထိုကဲ့သို့သောအိုင်၏အမည်ကိုမှငါ့ကိုမေးတယ်ဘယ်မှာအခြေအနေမျိုးသို့သွားလိမ့်မည်နည်း ငါသူတို့ရေကန်ခရိုင်အတွင်းရှိတက်သောအရာကိုမသိရပါဘူးဒါပေမယ့်ငါကဒီင်ထင်ကြပါဘူး။
The Sleep စမ်းသပ်မှု
အလေးအနက်ထား ... ရုံချွတ် fuck ဆိုတဲ့
• ဗြိတိန်အလယ်တန်းကျောင်းတိုင်းသည်ဤ ၃၇ ရယ်စရာကောင်းသောစကားမပြောသောကျောင်းစည်းကမ်းများကိုအဘယ်ကြောင့်ပြဌာန်းခဲ့ကြသနည်း။
•ထုတ်ဖော် - ကလေးများအများစုကိုအောက်စ်ဘရစ်ခ်ျသို့ပို့သည့်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ